Kitra – ligim-paritra 22: “Mety hisy fifidianana averina”, hoy ny « comité de normalisation » | NewsMada
Kitra – ligim-paritra 22: “Mety hisy fifidianana averina”, hoy ny « comité de normalisation »
Hampitomboana ny fanaraha-maso ny antontan-taratasy, isaky ny ligy mialoha ny fifidianana izay hitantana ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Mety hisy, araka izany, ny famerenana fifidianana, raha ny tatitry ny komitin’ny fanamarinana, tetsy Isoraka, omaly.
25 andro izay no nanendrena ny komity hitantana ny baolina kitra. Laharam-pahamehana ny fanatontosana ny fifidianana izay ho filoha hitantana ny federasiona, raha ny nambaran-dRamatoa Atallah Béatrice, nandritra ny famoriana mpanao gazety nataony. Amin’izao fotoana izao, miverina mijery ireo antontan-taratasy rehetran’ireo ligim-paritra 22, ny komity tantaniny hahafahana miroso any amin’ny fifidianana. “Ireo ligy ireo mantsy no hifidy ka izay ny antony anaovana izany. Nisy mantsy ireo nahitana olana sy nanaovan’ny Fifa fanamarihana ka tsy maintsy jerena. Araka izany, mety hisy ny fifidianana averina any amin’ireo ligy ireo. Milamina izay vao afaka miroso amin’ny fifidianana isika”, hoy izy.
Aorian’izay, vao handefa ny tatitra rehetra any amin’ny fifa izy ireo ka miandry ny fankatoavana. Nomarihiny fa averina hatramin’ny voalohany ny fametrahana ny antontan-taratasy ho an’ireo kandidà.
Ankoatra izay, nilaza ny tenany fa tokony hisy lalao ara-pirahalahiana nataon’ny Barea de Madagascar, tamin’ny ekipan’i Emirat Arabe Unis, ny 21 na 28 desambra ho avy izao.Tsy raikitra izany satria tsy afaka ireo mpilalao eto an-toerana izay ao anatin’ny fifaninanana tanteraka. Toy izany koa ireo mpila ravinahitra izay tsy omen’ireo kliobany raha tsy amin’ny andron’ny fifa. Mbola nandefa taratasy any amin’io ekipa io, ny “comité de normalisation”,raha toa ka azo ahemotra. Nitondrany fanazavana ny amin’ny fifaninanam-pirenena, ho an’ny taona 2019.Fohy ny fotoana ka tsy maintsy hezahina ho vitaina araka izay azo atao. Tsy maintsy tapitra amin’ny faran’ny volana febroary 2019 ny fifaninanana eo anivon’ny ligy 22 ary ireo izay hiatrika ny “Telma coupe” indray dia mila misoratra anarana mialoha ny faran’ny volana janoary 2019.Ny 26 mey no famaranana ho an’ity fiadiana ny amboaran’i Madagasikara,ity.
Farany, mihantona aloha ny famatsiam-bola ho an’ny federasiona malagasy, mandra-pahavitan’ny fifidianana izay ho filohany. Na izany aza misy ihany ny fanampiana avy ammin’ny CAF sy ny Fifa, ho an’ny fanamboarana foto-drafitrasa sy hanodinana ny asa anatiny.